ओली र नेपालबीच आक*स्मिक वार्ता: भर्खरै यस्तो निर्णय, देशभरका नेता कार्यकर्तामा छायो खुसीयाली ! (भिडियो हेर्नुहोस्) - Nepali in Australia
ओली र नेपालबीच आक*स्मिक वार्ता: भर्खरै यस्तो निर्णय, देशभरका नेता कार्यकर्तामा छायो खुसीयाली ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
May 13, 2021 autherLeaveaComment on ओली र नेपालबीच आक*स्मिक वार्ता: भर्खरै यस्तो निर्णय, देशभरका नेता कार्यकर्तामा छायो खुसीयाली ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
एमालेले चारै जनालाई पार्टी हित र विधान विपरीत काम गरेको भन्दै ६ महिनाका लागि पार्टी साधारण सदस्यबाट नै निलम्बन गरेको थियो। पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रको सहकार्य र
सद्भावलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुट भेला तथा पार्टीका कुभलो चिताउनेहरूसँग निरन्तर बैठक, भेटघाट गर्ने र उनीहरूको पक्षपोषण गर्ने कार्य निरन्तर गरेको भन्दै एमालेले कारबाही गरेको हो।
बैठकले नेपाललगायत असन्तुष्ट नेताहरूको मागको सम्बोधन र निर्णय लिन पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अधिकार दिने निर्णयसमेत गरेको छ। नेपाल पक्षलाई गरिएको कारबाही फिर्ता गरेर विपक्षी गठबन्धन नजान अपील गर्दै ओलीले नयाँ अस्त्र फालेका छन्।
नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न कस्सिएको नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दुई खेमा विभाजित भएपछि अन्योलमा परेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेमा असन्तुष्ट रहेका नेपाल पक्षका नेताहरुसँग छलफल तीब्र पारेका छन्। उनीहरुलाई राजीनामा गराएर बहुमत सिद्ध गर्न खोजेपनि माधव पक्षले निर्णय नगर्दा अन्योल बनेको छ।
एमालेका असन्तुष्ट पक्षको राजीनामा वा समग्र जनता समाजवादी पार्टी एकढिक्का नभएसम्म विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन।
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर एमालेमा प्रवेश गर्दै, फेरी बाहिरियो यस्तो स्क्रिनसट-